रोडमा गाएर बुढो बुवाआमा पाल्ने रिता राई ! भ्वाइसबाट बाहिरिएपछि रोडमै पुग्ने डरले रोइन् ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
रोडमा गाएर बुढो बुवाआमा पाल्ने रिता राई ! भ्वाइसबाट बाहिरिएपछि रोडमै पुग्ने डरले रोइन् ( भिडियो हेर्नुस )
On १२ कार्तिक २०७६, मंगलवार १०:०७
काठमाडौं : फ्रेन्चाइज रियालिटि शाे द भ्वाइस अफ नेपालको नक आउट चरण चलिरहेकाे छ । सनिवार प्रसारण भएको नकआउटमा टिम आस्थाका ६ जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिएका छन । जसमध्य सबैको मन जितेकि दृष्टिविहिन रिता राई पनि बहिरिएकि छिन ।
संखुवासभाकि रिता नकआउटबाट बाहिरिएकि हुन । नकआउटमा बाहिरिएकि रिताले सबैलाई भावुक बनाएकि थिइन । काेच राजु लामाले कार्यक्रमबाटै रितालाई आफ्नाे चेली बनाएका थिए । दाजुभाई नभएकि रिताले राजु लामालाई माइतिका रुपमा पाएकि छिन ।
ब्लाइण्ड अडिसन, ब्याटलमा सबैलाई भावुक बनाएकि रिताले नकआउटबाट बाहिरिदा पनि सबैलाई धावुक बनाएकि थिईन । नकआउटबाट बाहिरिएकि रिताले सडक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिदै भ्वाईस अफ नेपालबाट पाएको मायाले आफुलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरेकाे बताएकि छन ।
नकआउटमा चार टिमका ३६ जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन । एक टिमबाट ३ जना मात्र अघिल्लाे चरणमा प्रवेश पाउने भएकाले नक आउटलाई निकै राेमान्चक मानिएकाे छ ।अहिलेसम्म टिम दिपबाट सञ्जय, विकास र रजनी तथा टिम आस्थाबाट आरिफ, ससिका र यान्कि लाइभ राउण्डमा पुगेका छन ।
बिष पशुपतिले दिए अघोर बाबालाई खुल्ला चुनौती, भने, ”श्रीमती हेर्दै धोकेबाज जस्ती छे” !…